I-TechadminLab - iBlog Technology
I-Adobe Shockwave izokhishwa iWindows
Uma ukhule ne-intanethi, ngiyaqiniseka ukuthi uyazi nge-Adobe Shockwave. I-plugin esasiyifake sonke ngesikhathi sokudlala izinhlelo zokusebenza ze-multimedia nemidlalo yevidiyo. Ikhishwe yi-Macromedia ku-1995, kamuva eyatholakala ku-Adobe ku-2005, yesikhulumi ...
Faka izinhlelo zokusebenza kusuka kusitolo Kuwo wonke amadivayisi we-Windows 10 ngesikhathi esisodwa
Ukufaka uhlelo lokusebenza kusuka ku-Isitolo ku-Windows 10 kulula. Udinga nje ukuvula ikhasi lohlelo lokusebenza kuhlelo lokusebenza lwesitolo bese uchofoza inkinobho ethi Thola ukulanda nokufaka uhlelo lokusebenza ku-PC yakho. Kodwa kuthiwani uma unama-PC amaningi ...
I-Firefox Thumela: Yabelana ngamafayela Kuze ku-2.5GB
Ayikho isidingo semisebenzi yokwabelana yamafayela yamahhala. Eqinisweni, kunamakhulu ezinsizakalo zesitoreji nezinsiza zokwabelana ngefayela ezungeze. I-OneDrive, i-Google Drayivu, i-Dropbox, ne-iCloud Drive yizintandokazi zokugcina ifayela kanye nokwabelana ngamasevisi ngaphandle. I-Firefox Thumela i-Firefox Thumela i ...
Indlela Yokwakha iDrayivu ye-Lenovo USB Recovery ye-Windows 10
Kukhona usizo olungakhelwe ngaphakathi ku-Windows 10 ukudala idrayivu yokutakula ye-USB. Bonke abasebenzisi, kuhlanganise nabasebenzisi be-Lenovo PC, bangasebenzisa ithuluzi elakhelwe ngaphakathi ukulungiselela i-Windows 10 USB yokutakula drive. Inkinga ngesevisi yokutakula eyakhelwe ngaphakathi yukuthi ayikwazi ukudala ...
Ungayisebenzisa isikhathi eside kangakanani i-Microsoft Office ngaphandle kokusebenza?
Ufake ikhophi engavumelekile ye-Microsoft Office 2019 noma i-Office 365 kukhompyutheni yakho futhi ufuna ukwazi ukuthi ungasebenzisa isikhathi esingakanani umkhiqizo we-Microsoft Office ngaphandle kokuyisebenzisa? Kulesi siqondiso, sizoxoxa ukuthi umuntu angasebenzisa isikhathi eside kangakanani i-Microsoft Office ...
Isibuyekezo Sokuqalisa Kwe-Google March 2019: Imiphumela kanye Nezinyathelo Zokuthi Zithathelwe
I-Google ikhishwe isibuyekezo se-algorithm ku-12th ka-Mashi kulo nyaka. Futhi nalo, ziza eziningi zokucatshangelwa ngaphezu kwesilinganiso somthelela wayo, futhi yiziphi izitifiketi namasayithi okumele athinteke kakhulu. Kodwa ngaphambi kokuthi sibe singene ngaphakathi ...
I-Mozilla Firefox 66.0 Ikhishwe nge-Auto Auto-Play Evinjiwe
I-Mozilla Firefox 66.0 ikhishwe izinsuku ezimbili ezedlule. Manje itholakala kumakhompi amakhulu e-Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10. Amaphuzu avelele wokukhishwa kwe-Firefox 66.0: Vimbela ukudlala komsindo ngezwi. Ungangeza okuhlukile, noma uvale isici. Usesho olulula ngethebhu entsha ehlelwe kabusha ku-Abasese ...
I-Avidemux 2.7.3 Ikhishwe nge-Decoder Fixes ehlukene (Ubuntu PPA)
Umhleli wevidiyo we-Avidemux ukhishwe inguqulo entsha ye-bug-fix nje kwezinsuku ezingu-11 ngemuva kokugcina, ngokulungiswa kwe-decoder kanye nokungcwatshwa okuncane kwezinkomba eziveziwe zokukhishwa kwe-Avidemux 2.7.3: I-Vapoursynth manje isetshenziswe ngokuqinile ukuze igweme ukuphulukiswa kwephutha le-ASF / WMV le-demoler fixing BMP yokulungiswa kabusha kwe-BMP i-decoder Basic isindisa yamanje ...
Faka Umlando Wengoma Ngokushesha nge-Snap ku-Ubuntu 18.04, i-16.04
I-NXEngine Evo, ukuphinda kubhalwe kabusha kwe-classical side-scrolling platformer game Cave Story, manje kulula ukufaka ku-Ubuntu Linux usebenzisa iphakheji le-snap. I-NXEngine Evo iyi-clone ephelele evulekile-yomthombo / ukubhalwa kabusha kwesikhulumi se-jump-and-run esibuciko seDukutsu Monogatari (eyaziwa nangokuthi i-Cave Story) esakhiwe yi-Studio Pixel. ...
I-KeePassXC 2.4 Ikhishwe nge-High-DPI Ukulinganisa kwezikrini ze-4K
Ngemva kokukhishwa kwe-beta emibili, umphathi wephasiwedi we-KeePassXC i-2.4.0 ekugcineni uyazinza. Nakhu ukuthi ungayifaka kanjani ku-Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, nangaphezulu. I-KeePassXC i-2.4.0 yenza uhlelo lokuhlelwa kwesistimu lokubonisa ama-high-DPI ukubonisa, lengeza i-wizard entsha yedatha, isebenzisa usesho oluphambili, nokubuyekezwa okuzenzakalelayo kokuhlola ukuvumelanisa kwedatha ye-KeeShare ...
Isihleli Somaka we-Kid3 3.7.1 Sikhululwe, Indlela Yokufaka ku-Ubuntu
Umhleli wethegi yomsindo we-Kid3 ukhishwe inguqulo ye-3.7.1 namhlanje. Nakhu ukuthi ungayifaka kanjani ku-Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04, Ubuntu 18.10, nangaphezulu. I-Kid3 3.7.1 ngokuyinhloko iletha ukulungiswa kwezigciwane nokuthuthukiswa kokusetshenziswa. Izici eziningi ezintsha zihlose inguqulo ye-Android, manje esekela isihloko esimnyama, okungcono ...
[I-Tip Quick] Hambisa i-Clock kuya kwesokudla sePhaneli ephezulu ku-Ubuntu 18.04
Lokhu kufundisa okusheshayo kuzobonisa indlela yokuhambisa iwashi ukusuka phakathi kuya kwesokudla kwephaneli ephezulu ku-Ubuntu 18.04 Gnome Shell. Idethi nesikhathi ngokuzenzakalelayo kuboniswe phakathi kwephaneli phezulu kudeskithophu ye-Gnome 3. Kulukhuni ...
1 2 3 4 ... 1,570 Olandelayo
Ukubuka kuqala izandla ku-Crackdown 3 - Igeyimu ende elinde ilinde kusuka ku-limbo
I-Anthem Yokuthola Izenzakalo Zonyaka Ezibizwa ngokuthi 'i-Cataclysms'; Ukulawulwa kwe-PC ne-UI Ukuqalisa Ukubuyekezwa Okuningiliziwe
I-NVIDIA GeForce i-RTX 2070 8 GB GDDR6 Ukubukwa kwekhadi le-Graphics FT. I-MSI Isikhali X ...
AMD Radeon VII 7nm GPU Yenza Indlela Yabo Ababuyekezi Amabhendi Wokuhlola
I-Windows 10 19H1 Ukwakhiwa kwe-Windows Yamuva iveza izinhlelo zokusebenza ze-Desktop ku-Windows Mixed Reality
I-Anthem igijimela ku-PS4 Pro kune-Xbox One X, i-4K Checkerboarding Isetshenziswe ku- ...
Ukubuyekeza kwe-Windows 10 Ukuphinda Kwenzeke Abanye Abasebenzisi - Shintshela ku-DNS ye-Google ukuze ...
I-Asus iphuma ku-Android Pie ku-Zenfone 5Z ye-flagship: Nansi indlela yokufaka
I-FaceTime bug ivumela abasebenzisi be-iPhone ukuba bahambisane nokuxoxa; I-Apple okwamanje ukuthatha isinyathelo
Ukubuyekezwa kwe-PUBG # #25 isiqeshana manje siphila kuseva yokuhlola: Bizon SMG, Canted Sight, Vikendi ...
I-WhatsApp yewebhu ithola inketho yesithombe-in-isithombe: Nakhu ukuthi ungaqala kanjani
I-Samsung Galaxy M10, intengo ye-M20, imininingwane yezinto zokugcina isitoreji ezakweqa ngaphambi kokuqaliswa
Abanikazi be-OnePlus abangu-6T bekhalaza ngebhethri engavamile ngokusheshayo: Ingabe kukhona isisombululo sokulungisa ...
Whatsapp, Instagram, Facebook ukuhlanganiswa Messenger: Kusho ukuthini kubasebenzisi?
Imodi ye-PUBG Mobile ye-zombie iyesabeka, isinselele futhi ihle kakhulu umcimbi we-crossover: Ukubuyekeza
Copyright © 2019 I-TechadminLab